Safarkii Sacuudi Arabiya iyo wixii aan ku soo arkay. Musharaxa M/kuxigeenka Xisbiga UCID. Dr. Maxamed-Rashiid « SAWNEWS NETWORK
« Baaq Ay Soo Saareen Qurbo Joogta Reer Awdal Iyo Salel Oo La Xidhiidha Arinta Jidgooyada Ee Ka Dhacday Inta u DHexaysa Dilla Iyo Gabiley
Labo Wariye oo Loo Xidhay Sixun uga Waranka Dagaalkii Ceelbardaale »
Safarkii Sacuudi Arabiya iyo wixii aan ku soo arkay. Musharaxa M/kuxigeenka Xisbiga UCID. Dr. Maxamed-Rashiid
Saddex todobaad ka hor waxa aniga, gudoomiyaha xibsiga UCID, engineer Faysal Cali waraabe waxa aanu safar ku tagnay wadanka Sacuudi Arabiya anaga oo u soconay in aanu soo cimraysano lana kulano masuuliyiinta wadankaan iyo dadka reer Somaliland ee degan guud ahaan wadankaas.
Haddaba maqaalkan waxa aan si kooban uga waramayaa waxyaalihii aan ku soo arkay intii aanu joognay Saudi Arabiya.
Xidhiidhka Somaliland iyo Saudi Arabiya
Wadanka Sacuudi Arabiya waa wadanka udub dhexaadka u ah diinteena Islaamka. Waxa ka dhexeeya wadankeena Somaliland iyo wadanka Sacuudiga xidhiidh dhinacyo badan ah. Markii Boqortooyada uu aas aasay , aasaasihii Boqortooyada Sacuudi Arabiya, Boqor Cabdulcasiis, waxa dadkii ugu horeeyay ee lashaqayn jiray ee Afika ka yimid waxa ugu horeeyay dad ka tagay Somaliland. Waxa ay dadkaasi ka shaqayn jireen boqorka aqalkiidsa waxayna isaga iyo caa’iladiisaba u wadi jireen baabuurta. Waxa kale oo ay u ahaan jireen dabaakhiin iyo illaaliyaal gaar ah. Taasi waxa ay keentay in Caa’ilada reer Sacuudi Arabiya ay jecayl iyo qadaris badan u hayeen ilaa maantadana u hayaan dadka ka soo jeeda Somaliland.
Waxa kale oo aynu u dhoofin jirnay xoolaheena Sacuudigu oo u u yaqaanay Barbaraawi kaas oo mari jiray dakadeena Berbera.
Waxa kale oo jirta in Boqortooyada Sacuudi Arabiya ay siiso ahmiyad wadankeena oo ku yaala meel istaraatiiji ah marka aan dhincawalba aad u fiirsato. Dadka reer Somaliland ee degan Boqortooyadu waxa ay la yaabeen sida fudud ee aynu u dayacnay xidhiidhkaa soo jireenka ah. Haddaba, su’aasha meesha taalaa waa yaa ka masuul ah xidhiidhkaa la dayacay? Maxaase hadda laga qaban karaa?
Siyaasadda Arrimaha Debada ee Somaliland
Wadankeena Somaliland siyaasaddiisa arrimaha debadu ma ayna siin wax muhiimad ah xidhiidh ay la yeeshaan wadamada carabta, siiba wadanka Sacuudi Arabiya. Marka la waydiiyo sababta keentay taas waxa ay madaxdu marmarsiiyo ka dhigtaan in wadamada carabtu ay doonayaan Soomaaliya oo mid ah.
Iyada oo ay sidaaba tahay, maxaan u dayacnay in aan dhinaceena ka dhaadhicino qadiyadeena madaxda Sacuudiga? Waxa loo baahan yahay maanta in aynu soo noolayno xidhiidhkaas isaga ah, inaga oo la kaashanayna dadka reer Somaliland siiba aqoonyahankeeda iyo baayacmushtarigeeda degan Sacuudi Arabiya oo qaar badan haystaan Jinsiyada Sacuudiga yihiina Sacuudiyiin. Haddaba, xidhiidhkii aynu la laahaan jirnay Boqortooyada Sacuudi Arabiya waxa uu ahaa mid muhiim ah, sidaa darteed waa in la soo nooleeyaa.
Hadday sidaasi dhacdo, waxa faa’iido badan ka helaynaa dhinaca dhaqaalaha oo Sacuudigu maalgashado wadankeena iyo dhinaca siyaasada labadaba.
Sababaha diciifinkara kordhin karana aqoonsigeena
Waxa aynu nahay wadan gooni isku taagay. Waxaynu madaxbanaanayn mudho ku dhow labaatan sanadood. Xilligaas oo dhan waxa aynu raadinaynay aqoonsi aynu ka helno beesha caalamka, laakiin wadadooyinkii aynu u mari lahayn aqoonsiga ayaynaan ka faa’iidaysanayn.
Wadanada aynu jaarka nahay qaar ka mid ah ayaa u toshay ilihii dhaqaalaheena weel, taasina waxa ay wax u dhimaysaa helitaankii aqoonsiga waayo waa waxa la isku qiimeeye dhaqaaluhu.
Waxa aynu leenahay ganacsato maalgashi kala duwan ku samayn kara wadankeena sida bangiyada, iyo hay’adaha kale ee dhaqaalaha, miyayna ganacsatadeenu kari karin in ay (letter of Credit-kooda) iyo qaybaha kale ee baayac mushtarigooda si toos ah ugu maamulan karaan Somaliland? Maxaa looga baahday xafiis dilaal ah in Hargeisa laga furo oo dhawr qof joogaan?
Wadankani haddii la doonayo in uu gaadho ujeedadii loo aasaasay waa in isbedel lagu sameeyaa. Ta kaleya ee isbedel lagu samayn karaana maanta waa in fursada doorashada ee soo socota laga faa’iidaysto. Waa in laga wada shaqeeyo sidii ay u heli lahay doorasho xor iyo xalaal ah oo si nabadgalyo ah ku dhacda.
Dr. Maxamed-Rashid Sheikh Xassan
This entry was posted on July 13, 2009 at 11:17 am	and is filed under News (Warka). You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.